अविवाहित युवतीहरूलाई मोबाइल बोक्न प्र’तिब’न्ध, ! – Life Nepali
अविवाहित युवतीहरूलाई मोबाइल बोक्न प्र’तिब’न्ध, !
यदि कुनै अविवाहित युवतीबाट मोबाइल बरामद भएको खण्डमा उनका पितालाई जरिमाना गरिने छ । जरिमाना स्वरूप १ लाख ५० हजार भारू पञ्चायतलाई बुझाउनुपर्ने छ । यसबाहेक यदि युवतीले अभिभावकको सहमतिबिना विवाह गरेमा पनि पञ्चायतले अपराध गरेको मान्दछ । जिल्ला पञ्चायत सदस्यका अनुसार पञ्चायतले समाजको हितका लागि यस्तै विभिन्न निर्णय गर्दै आएको छ । विवाहमा अनावश्यक खर्च रोक्नका लागि डिजे र आतिसबाजीमा पनि पञ्चायतले रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।
Previous पत्रकार ऋषि धमलालाई अहिलेसम्मकै ठूलो माला लगाएर भव्य स्वागत !